कोभिडसँग लड्न खानपिनमा ध्यान दिन विज्ञहरुको सुझाव – Gaule Media ::
Home/समाचार/कोभिडसँग लड्न खानपिनमा ध्यान दिन विज्ञहरुको सुझाव
Gaule media२ कार्तिक २०७७, आईतवार १९:२५
काठमाडौं , कार्तिक २ । कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लडने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दएका छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइरालाले खाने कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
भाइरोलोजिस्ट डा. बाबुराम मरासिनीले दसैंका बेला सहर-बजारबाट आफ्नो घरमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । दसैंमा घर नजानभन्दा पनि घर गएपछि संक्रमणबाट जोगिन विभिन्‍न उपाय अपनाउन सकिने बताए । घरमा गएपछि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुनुभन्दा अलग्गै बस्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । खाना खाँदा दूरी कायम गर्ने, दसैंमा टीका लगाउँदा खुला ठाउँमा लगाउने, भिड नगर्ने हो भने रोग लाग्नबाट बच्‍न र बचाउन सकिने डा. मरासिनीको भनाइ छ ।